Waxaan hadeer layga baaray oo layga helay caabuqa galmada laga qaado (STI). Sidee ayaan ugu sheegaa lamaanaheyga (lamaanayaasheyda)? – Help Center
Maku qaadan karaa guriga baaritaanka HIV?
Dooqyada ka hortaga uurka ayaa u shaqeeyo dadka labeebka ah?
Waxaan hadeer layga baaray oo layga helay caabuqa galmada laga qaado (STI). Sidee ayaan ugu sheegaa lamaanaheyga (lamaanayaasheyda)?
Waa maxay ogolaanshaha?
Maxaan weydiiyaa si aan u hubiyo inaan helayo baaritaanka STD ee ugu dhameystiran?
Intee jeer ayaan helaa baaritaanka HIV/STD?
Halkee ayaan ka heli karaa baaritaanka HIV/STD?
Miyuu dhaqtarkeyga u baahanyahay inuu ogaado dooqeyga galmada ama aqoonsiga jinisga?
Intee jeer ayay dadka qabo HIV ayaa rarka fayruskooda la baaraa?
Miyay daawooyinka HIV ama PrEP qilaaftaa hoormoonada labeebka?
Baaritaanka laga helay STI waxay noqon kartaa waaya aragnimada dareenka. Waa muhiim inta lagu jiro waqtigaan in la daryeelo nafsadaada jir ahaan iyo dareen ahaan.
Hal wado loo daryeelo nafsadaada waa la hadlida dadka adiga ku taageerayo. Helida dad aad aaminsantahay noloshaada oo aad la wadaagi kartid xaaladaada oo kugu caawin karo inaad dareentid kali ahaanshaha adiga oo raadinayo daaweyn.
Sida ay kuugu suurtogaleyso inaad maamushid caafimaadkaaga ee xigga natiijada baaritaanka laga helay, waxaad sidoo kale xoojin kartaa lamaanayaasha la soo dhaafay adiga oo u sheegayo in uu kugu dhacay STI. Ogeysiinta lamaanayaasha la soo dhaafay natiijada baaritaankaaga laga helay, waxaad u suurtogelineysaa inay ku helaan si dhaqso ah baaritaan iyo/ama daaweyn.
Ma jirto hal wado oo kale ee loogu sheego lamaane inay u baahan karaan inay baaritaan ama daaweyn helaan. Waxaad si toos ah ula xiriiri kartaa lamaanayaasha la soo dhaafay adiga oo soo wacayo ama fariin u dirayo, fariin u diristooda oo dhinaca abka Grindr, ama u sheegidooda qof ahaan. Xaaladaha qaarkood waxay dareemi kartaa xishood iyo ceeb inaad u sheegtid lamaane in baaritaanka lagaa helay, oo sameynta sidaas waxay xittaa dareemi kartaa badbaado la’aan. Haddii taasi ay tahay xaalada, waxaad isticmaali kartaa adeegyada ogeysiinta lamaanayaasha ee waaxda caafimaadka deegaanka ama Building Healthy Online Communities bogga ogeysiinta lamaanaha. Si kastaba go’aansashada inaad ogeysiid lamaanahaaga adiga ayay kuu taalaa.